सुजंगमा वाइवाइ एसइइ क्वीज सम्पन्न, सहिद स्मृति प्रथम
आइतबार, पुष २७, २०७६
डोटी, पुस २७ । राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा प्रभात शैक्षिक मञ्चको आयोजनामा सुपका ९ जिल्लाका २० स्थानमा भईरहेको वाइवाइ एसईई क्वीज अन्तरगर्त आज डोटी जिल्लाको सुजंग ई.बो.स्कूलमा अडिसन सम्पन्न भएको छ । कुल १२ टिम सहभागी भएको उक्त प्रतियोगितामा राजपुरमा रहेको सहित स्मृती आवासीय मा.वि. प्रथम भएको छ ।
यसै गरि दिपायल पिपल्लामा रहेका उक्त प्रतियोगितामा अमर ज्योती मा.वि. द्वितिय र सुजंग ई.बो.स्कूल तृतिय भएका छन् । विद्यालयका अमर कठायतको सभापतीत्वमा भएको कार्यक्रममा नविन फाउण्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक नरेश बलायर प्रमुख अतिथी रहनु भएको थियो । कार्यक्रम केशवराज ओझाले संचालन गरेका थिए ।
विजेता विद्यार्थीले मेडल प्रमाण पत्र सहित वाइवाइ र रेडिकल एकेडेमीका तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर, छात्रवृत्ती कुपन प्राप्त गरेका छन् भने आउँदो वैशाख ४ गते धनगढीमा आयोजना हुने प्रदेश स्तरीय यस प्रतियोगिताको फाईनलमा सहभागी हुने अवसर पाउनेछन् । प्रतियोगिताको फाईनलमा रु ५० हजार बढीको नगद पुरस्कार सहित ब्रिजकोर्ष पुरै निःशुल्क र कक्षा ११र१२मा छात्रवृत्ति पनि प्रदान गरिनेछ । यस प्रतियोगिताको फाईनलमा प्रथम हुने टोलीले नगद पुरस्कार रु ३० हजारका साथमा प्रमाणपत्र, ट्रफी, मेडल,विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर पनि प्राप्त गर्नेछन् भने विजेता टोलीका टोलीका हरेक विद्यार्थीलाई एसइई पछिको ब्रिजकोर्षमा १०० प्रतिशत छात्रवृत्ति र कक्षा ११ माअध्ययनगर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगिताको फाइनल दोस्रो हुने टोलीले नगद पुरस्कार रु १५ हजारका साथमा प्रमाणपत्र, ट्रफी, मेडल,विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर पनि प्राप्त गर्नेछन् ।